Roob la'aan, waxba ma koro, baro inaad qabsato duufaanta noloshaada. - qarsoodi - Quotes Pedia
Roob la'aan, waxba ma koro, baro inaad qabsato duufaanta noloshaada. - Qarsoodi
Waxay leedahay taas Guuldarrooyinku waa qayb muhiim ah nolosheena sababtoo ah waxay noo qaabeeyaan kaliya sida ugu fiican. Mararka qaar waa inaan fahamnaa xaqiiqda in duufaantu aysan u imaan oo keliya inay burburiso nolosheena laakiin sidoo kale aan nadiifinno jidkeenna.
Noloshu waligeed sariir ah ubaxyo ma ahan waana markab koronto oo fuul. Noloshu waxay leedahay mudnaanteeda iyo micnaheeda. Waa inaanaynaan lumin rajadii iyo aaminaada Eebbe. Waa inaan xasuusnaano inuu Ilaahay inoogu diyaarinayo nolol aad ufiican oo macno leh isagoo ina siiya casharo nolosha ah.
Guul darrooyinka ayaa ah talaabooyinka guusha maxaa yeelay waxaan ku koraynaa kaliya qaladaad aan sameynno. Waa inaan qalad sameynnaa maxaa yeelay waxay kaliya naga caawiyaan falanqaynta sababta iyo halka aan khaldanahay.
Fikirka caanka ah iyo fisikiska ah Albert Einstein wuxuu mar yiri qofkasta oo aan waligiis khalad sameynin waligiis iskuma deyin wax cusub. Xaqiiqdii, in badan oo guuldarrooyinka nolosha ayaa ah kuwa ka tanaasulay daqiiqada ugu dambeysay halkii ay ka garan lahaayeen sida ay ugu dhow yihiin guusha.
Waa inaanu waligeen ka niyad jabin nolosha markaynu aragno guuldarooyinkayaga. Tani waa sababta kaliya ee joogtada ah ee adduunku ay tahay isbeddel, wejigan xunna sidoo kale waqti ayuu ku dhammaan doonaa. Waa inaan xasuusnaano in marka ay xaaladdu adkaato, kaliya kuwa adag ay sii socdaan. Taas macnaheedu waa inaan dooranno aayaheena gaarka ah.
Shaqadeena adag iyo halgankayagu runtii waa qaab-dhismeedka farriinta guusha. Waa muhiim in aan waqti siino oo aan yeelano dulqaad aan sugno natiijada. Wax kastoo ay ka dhacaan nolosha, waa inaan waligeen rajo dhigin.
Ku guuleystayaashu ma sameeyaan waxyaabo kala duwan; laakiin wax uun bay u qabtaan si ka duwan sidii hore. Noloshu waa wax walba oo ku saabsan sida loo fahmo oo loo tarjunto khaladaadkeena iyo sida ugu fiican ee suurtogalka ah loogu isticmaalo waqtiga iyo kheyraadka si aan u dhaqaaqno si caqli leh, oo noo qaadan doonta hal talaabo oo guusha.
Ku aqriso xigashooyinka
Quotes Korriinka iyo xigashooyinka horumarka
Xigashooyinka waxyi ah ee kusaabsan nolosha
Xigashooyinka nolosha dhiirigelinta
Xigashooyinka dhiiri gelinta ah ee ku saabsan nolosha
Xigashooyin Sabti Fiican
Xigashooyin gaagaaban oo kusaabsan nolosha
Xigashooyin sare oo kusaabsan nolosha
Dad wanaagsan baa is-dhiirrigeli, laakiin dadka waaweyn ayaa dhiirrigeliya kuwa kale. - Qarsoodi
Dadka wanaagsan ayaa karti u leh inay is dhiirrigeliyaan. Had iyo jeer waxay isku dayaan inay naftooda dhiirrigeliyaan si ay u gaaraan ...
Hadaad dareento inaad quusteen, dib u fiiri intaad hada joogtid. - Qarsoodi
Waa u kuurgelid guud in ciladaha nolosha dhabta ahi yihiin kuwa ay ka tanaasushay…
Kama soo jiito lacag, xaalad bulsheed, ama cinwaan shaqo. Waxaan la dhacsanahay sida qof ula dhaqmo aadanaha kale. - Qarsoodi
Waxaan u maleynayaa in qiimaha ugu weyn ee qof waligiis lahaan karo uu yahay hubinta bixinta saxda ah…
Waxkasta oo ku kacaya nabadaada waa qaali. - Qarsoodi
Deganaanshaha maskaxda iyo ladnaanta ayaa runtii ahmiyad aad u weyn si ay ugu noolaadaan nolol caafimaad iyo fudud. Maskaxda…
Farxad. Noqo ciddaad rabto. Haddii kuwa kale aysan jeclayn, markaas sii daa. Farxad waa ikhtiyaar. Noloshu maaha mid ka farxisa qof walba. - Qarsoodi
Farxad waa shay muhiim noo ah nolosheena. Wax walba waan sameynaa si aan ugu faraxsanaano…